Kooxda Manchester United oo heshiis la gaartay daafaca Napoli ee Kalidou Koulibaly – Gool FM
Kooxda Manchester United oo heshiis la gaartay daafaca Napoli ee Kalidou Koulibaly
(Manchester) 15 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis la gaartay difaaca mayalka adag ee kooxda Napoli, Kalidou Koulibaly si ay ugu soo xoojiyaan difaacooda.
Koulibaly ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Garoonka Old Trafford kaddib markii uu wacdaro ka dhigay intii uu joogay Napoli, si uu u muujiyo inuu yahay dafaac u qalma in lagu soo dalbado lacago qaali ah.
Inkastoo ay kooxdiisa Napoli ay horay u lahaayeen go’aan adag oo ku saabsan mustaqbalkiisa si aysan iskaga iibin, haddana kooxda reer Talyaani ayaa la sheegayaa inay hadda diyaar u tahay in ay dhageysato dalabyada laga soo gudbinayo daafaca dhexe inta lagu guda jiro sanadkan 2020.
Sida laga soo xigtay Suxufiga reer Talyaani ee Fabio Santini, Man United ayaa ku wargalisay kooxda Napoli inay diyaar u yihiin inay bixiyaan 64 milyan oo gini si ay Old Trafford uga soo dajiyaan 28-sano jirkaan difaaca dhexe ka ciyaara.
Isagoo la hadlayey Il Processo, Santini waxa uu yiri: “Napoli waxay ka iibin doontaa Kalidou Koulibaly kooxda Manchester United qiimo dhan 70 milyan ilaa 75 milyan oo gini, waxay u muuqataa in wax walba la dhammeeyay.
“Caadi ahaan, heshiiska noocan oo kale ah waxa uu dhici doonaa oo kaliya bisha June, runtiina bishaan Janaayo suura-gal ma’ahan, kaliya wax ay Manchester United sugi doontaa suuqa kala iibsiga xilliga qaboobaha.”
Koulibaly ayaa Napoli ugu fadhiya qiimo dhan 8 milyan oo gini oo ay kaga soo iibsadeeen kooxda Genk ka hor bilowgii kal ciyaareedkii 2014-15.
Romelu Lukaku oo arrintan kaga mahad celiyay taageerayaasha kooxda Inter Milan
Jose Mourinho oo ka hadlay suurtogalnimada uu Christian Eriksen kaga dhaqaaqi karo Tottenham